मादव नेपालको सेखी झार्न ओलिले भिम रावललाई दिए यति ठुलो पद उपहार ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मादव नेपालको सेखी झार्न ओलिले भिम रावललाई दिए यति ठुलो पद उपहार !
नेकपा एमाले भित्रको बिबाद करिब सकिएको छ । उपाध्यक्ष भिम रावलनै ओलीकै लाइनमा उभिएपछि एमाले गुटविनाको पार्टी बन्न सफल भएको हो
विधानअनुसार दसौं महाधिवेशनबाट १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १५ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचितमध्ये १२ पदाधिकारी अहिले एमालेमा छन् । हाल कायम रहेका सबैजसो पदाधिकारी पदोन्नति हुने वा नभए सोही पदमा दोहोरिन चाहेका छन् ।
ईश्वर पोखरेल भने दुई कार्यकाल महासचिव बनेका कारण सोही पदमा आउन विधानले नै रोक्छ, अन्य पदाधिकारी भने दोहोरिन सक्छन् । नयाँ कमिटीको पदाधिकारीमा अन्य नेता पनि आकांक्षी भएकाले एमालेभित्र नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्ने देखिन्छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मात्रै नभएर एकीकरणको प्रक्रियाबाट आएका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको चाहना र दाबी पदाधिकारीमा छ ।
हाल एमालेभित्र अध्यक्ष ओली पक्ष, दसबुँदे सहमति गर्ने नेताहरू र पूर्वमाओवादी गरी तीन समूह अस्तित्वमा छन् । पदाधिकारीमा तिनै समूहका नेताको भिन्दाभिन्दै रणनीतिसहितको दाबी छ ।
ओली एकताको सन्देश दिने गरी शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउने र अनुकूल टिम बनाउने योजनामा छन् । ओली समूहमै रहेका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेलसहितका नेता पनि जोडघटाउमा सक्रिय देखिएका छन् ।
एमाले विधानले कुनै पनि पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुन रोक लगाएका कारण महासचिव पोखरेललाई व्यवस्थापन ओलीका लागि चुनौती बनेको छ ।
पहिलेदेखि झिनो स्वरमा अध्यक्षमा दाबी गरेका पोखरेलले पछिल्लो समय भने ओली निर्विकल्प भएको बताउँदै आएका छन् । ओलीको सद्भाव पनि पोखरेलतर्फै रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रयास जटिल बन्दै गएको छ । असन्तुष्ट र पूर्वमाओवादीलाई मात्र होइन, ओलीलाई आफ्नै समूहभित्र धेरै आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती आइलागेको छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चाहे पनि अहिलेसम्म ओलीले आफ्नो रणनीति निकट नेताहरूसँग समेत खुलाएका छैनन् । त्यसैले पदाधिकारीको नेतृत्वबारे अनिश्चितता अझै गहिरो देखिएको छ ।
अहिलेसम्म अध्यक्षले कसलाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भन्ने केही खोल्नुभएको छैन, अन्तिमसम्म सबै आकांक्षी हेर्ने र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै आफूअनुकूल टिम बनाउने उहाँको रणनीति देखिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर आफ्नै समूहभित्र पनि पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै छन्, त्यसैले टिम मिलाउन सहज छैन ।’
पार्टी विधानले केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिला राख्नैपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तोमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा पदाधिकारी समावेशी बनाउन सहज हुनेछ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय, महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिवहरू सदस्य रहेको केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्नेछ ।